2015 ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » 2015 ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ?
2015 ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ?
Posted by မင်း ခန့် ကျော် on Jun 30, 2014 in Politics, Issues | 46 comments
ဖွတ်ကလေးတို့ရယ်တဲ့ ငြိမ်ဝပ်ပိပြား (အသက်သေ)
အတိုက်အခံလေးရယ်တဲ့ ပွထ ( အပုပ် နံ့တစ်ဟောင်ဟောင်)
အမယ် ဟို ငြိမ်းချမ်းစင်တာကဆရာကြီးတွေကတော့
နောက်ကြောင်းပြန် ကွက်တွေ တစ်ခုမဟုတ် မသုံးရင်ကို ကျေးဇူးတင်ရပါဦးမယ်။
အုပ်ချုပ်ရေး = ပြည်ခိုင်ဖြိုး
ဥပဒေပြု = ပြည်ခိုင်ဖြိုး
တရားရေး = ပြည်ခိုင်ဖြိုး
အုပ်ချုပ်ရေး = ပြည်ခိုင်ဖြိုး + ဒီချုပ်
ဥပဒေပြု = ဒီချုပ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ မဖြစ်နိုင်မယ့်ဖက်ပေါ့…။
သူကသာ.. သမ္မတဖြစ်ရင်.. နိုင်ငံရေးချိန်ခွင်လျှာ လွဲသွားမယ်ဖြစ်တာမို့.. စစ်တပ်က၀င်ပါ(အာဏာသိမ်း)ပါလိမ့်မယ်..။
မြန်မာပြည်ရဲ့ အင်အားအကြီးဆုံး အား၃အား/သား၃သားထဲမှာ..
စစ်သားနဲ့ ဘုရားသား(ဘုန်းကြီး) ပေါင်းမိနေတာပါ..။
ဒါကို မရှင်းထုတ်နိုင်သမျှ.. နှစ်ဘယ်လောက်ကြာကြာ.. တိုင်းပြည်ကောင်းမယ်လို့.. တယ်… မ…ထင်..။
ဒေါ်စုသမ္မတ မဟုတ်တဲ့ NLD ပါတီ
ရှေ့ဆက် အနိုင်ရ အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရခဲ့ရင်
ဒီတော့ 100% ဒေါ်စုက ဒါကို
ဒီသားသုံးသားကို ဒေါ်စု မနိုင်ပါဘူး။
ဒေါ်စုရဲ့ စည်းရုံးရေး ဗျူဟာကို
သားသုံးသား ကို ချိန်ခွင်ထဲ
အဲဒီ သား ၃ သားကို တခါတည်း ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ အာဏာရှင်တွေပဲ တတ်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ သား၃သားကို အကုန်ဖမ်းပြီး ထောင် တစ်ခုထဲသာ ထည့်ထားလိုက် တစ်စုတစ်စည်းထဲဖြစ်ရောပဲ။
အဲဒီတော့ အာဏာရှင်လမ်းပြန်ချင်တဲ့ ဦးသေးစိမ် အစိုးရကိုသာ မဲပေးသင့်ပါတယ်။
တဂဒဲ ဂလိုပြောလိုက် ပြီးရောဟာ။
သံချောင်းပါတီ အနိုင်ရမယ် ထင်ပါတယ်
သောက်အုပဒေသာ ပြင်ဖို့စဉ်းစားပါကွယ်.. ဘွားဒေါ်ဂေါ ၈၈တွေပါ အဲဒီဖက်ပဲ အာရုံစိုက်နေတယ်..။ ၂၀၁၅ ရွေးဂေါက်ပွဲက လိုပါသေးတယ်..
ဟိုက မလိမ့်တကါတ်နဲ့ 2015 ကိုခုန်ကူးသွားမှာ
လွတ်တော်ထဲ တအုပ်တမ ဝင်နိုင်ဖို့က ပထမအူးစားပေး
ခံပေါ့ကွယ်.. ဒလောက် အမှတော့.. အသနားဗာ…
ရွာထိန်းမယ် ဆီရောင်းတဲ့သူ နှစ်ယောက်ရှိတယ် ဒက်ကြောင်…
ငင်င်င်… နာမြန်းပို့စ်မှား လာမန့်မိသလား
– ဒေါ်စုကို ဆန့်ကျင်နေသူအားလုံးကို တခုမေးမယ်။
– သူမကို သမတအဖြစ် ၅ နှစ်တည်း တာဝန်ပေးရမှာ
– ဘာလို့ သေမလောက် ကြောက်နေတာလဲ။
– နေဝင်း ၂၆ နှစ်
– သန်းရွှေ ၂၂ နှစ်
– အုပ်ချုပ်ပြီး ပြည်ဖျက်သွားတာကို အစင်းသား ငုံခံလာပြီးမှ
– ဒေါ်စု ၅ နှစ်ကို ဘာကြောက်နေတာလဲ။
– နောင် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အတွင်း ဒုတိယနေဝင်း၊ ဒုတိယသန်းရွှေ၊
– ဒုတိယသိန်းစိန်တွေ ရိုက်သတ်လို့မကုန်အောင် ရှိနေမှာ မပူပါနဲ့ ..
– ဒုတိယဦးအောင်ဆန်း၊ ဒုတိယဒေါ်စု ထပ်ရှိလာဖို့ မသေချာဘူး
– Credit to D Myo Chit
ငင်င်င်… နာမြန်းပို့စ်မှား လာမန့်မိသလား (CD to Wow)
၂၀၁၅မှာ ဒီချုပ်က အမတ်နေရာအများစုနိုင်လိမ့်မယ်..။
ဒေါ်စုကို သမ္မတနေရာပါပေးရရင်.. အစိုးရအဖွဲ့မှာပါ ဒီချုပ်ဖြစ်ရင်.. အခုပြည်ခိုင်ဖြိုးဘယ်နေလိမ့်မလည်း..
တိုင်းပြည်ရှုပ်အောင်.. ယုတ်မှာပေါ့..။ စစ်တပ်ပြန်ဝင်လာမှာပေါ့..။
နောက်ပြီး ပါတီတခုတည်းကလည်း.. မဏ္ဍိုင်၂ခု ချုပ်ကိုင်နိုင်ရင်.. တိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးချိန်ခွင်လျာပျက်မယ်လို့.. ထင်မိတယ်..
ဆိုတော့…. ၄၃၆ပြင်ခွင့်ရမယ်.. ၅၉(စ)တော့.. မရ..
ရလည်း.. ဒေါ်စုက.. ဒုသမ္မတ.. ဒါမှမဟုတ်.. လွှတ်တော်ထဲအကြီးအကဲတနေရာ..ဒါမှမဟုတ်.. ပြည်နယ်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နေရာနဲ့.. ပြီးသွားလိမ့်မယ်..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဒီမြန်မာပြည်… ဒီဘာသာရေးနဲ့.. လက်ဆယ်ချောင်း.. ၂ခါ.. ၃ခါ…
လွှတ်တော် ထဲ အကြီးအကဲ ဆို . . . . လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ဖို့ အနီးစပ် ဆုံးပဲ သူဂျီး ရဲ့
ပူးပေါင်းဖို့ရာက အဓိက လိုအပ်တာက
အခြေအနေအရ ဒေါ်စုကို ဆက်ဆံရေး တွေ
ဒဂျီး ဒဂယ် လက်ဆယ်ချောင်း.. ၂ခါ.. ၃ခါ…လား
တော်တေး အနှစ်တစ်ထောင်ကျိန်စာ မဟုတ်လို့
အနှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာက.. ရှင်အရဟံ(ဆိုတဲ့) ခေတ်ကစတွက်တာလေ…။
တလောက.. သမိုင်းပညာရှင်တယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်တဲ့.. မြန်မာပြည်ကအတွေးအခေါ်တွေပြောင်းပြောင်းလာတာ… မူကွဲတွေတက်တက်လာတာ.. နှစ်၁၀၀၀ ထဲ.. ၃-၄ခါလောက်ထပ်ရှိနိုင်သေးဆိုပဲ..။
ကံကောင်းရင်(ကံကောင်းရင်) … အခြေခံပညာအဆင့်လောက်မတတ်သူတွေ.. ခေါင်းဆောင်လုပ်… ပြောစကား… နားမထောင်..လိုက်မလုပ်တဲ့ခေတ်.. မြန်မြန်ရောက်မယ်ထင်ပါတယ်..
ဆိုတော့.. လက်ဆယ်ချောင်း.. ၂ခါ.. ၃ခါ…
အခုရော အဲဂလို ခေတ်မဟုတ်လို့လား သူကြီးမင်းရဲ့။
ဟိုဒင်းလေ တထု ပြောဗျဇေ –
အီပေါ်ဂ ဆြာ Kai ပြောဇဂါး မန်မယ် –
ဆယ်ချောင်း ၂ ဂါ ၃ ဂါ ဆိုသမို့ – နစ်တုံးချယ် –
သိပ်​ပြီး​မျှော်​လင့်​ချက်​မထားပါရ​စေနဲ့ကွယ်​ ​မျှော်​လင့်​ထားသမျှ ဖြစ်​မလာရင်​ အသီးကွဲရလွန်းလို့ ။ ကျုပ်​က​တော့ သိပ်​ပြီးထူးခြား ​ပြောင်းလဲလာမယ်​မထင်​ဘူး ။ လူ​တွေရဲ့ အကျင့်​​တွေမပြင်​သ၍ ဒီအတိုင်းပဲ ဒီအတိုင်းပဲ ခရီးဆက်​​နေအုန်းမှာပဲ
ဟိုဘက်က နိုင်ငံရေးသူငယ်နာ နဲ့ပေါင်းပြီး ၂ပို့စ်ပေါင်းကို ဖတ်နေတာ ၅ခေါက်လောက်ရှိပြီ။
ဇီဖီနဲ့ ဝေါင်းရေ … ခန့်ခန့်ပြောတာ သေချာဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။ သူက အမေစုကို သမ္မတ မဖြစ်စေချင်တာ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ သူပြောတာ အရမ်းနည်းလမ်းကျတယ်။
ခန့် ပြောတာက : (၁) လက်ရှိ သတိမမေ့သင့်တာက အာဏာရပါတီရဲ့ ဥက္ကဌ ဟာ လွတ်တော်ဥက္ကဖြစ်နေပြီး သမ္မတ မလုပ်တာက အကြောင်းတခုတော့ရှိပါလိမ့်မယ်။ (၂) အမေစုကို မဟုတ်ဘဲ NLD ကိုဝန်းရံသင့်တဲ့ အချိန် ဆိုတာရယ်။ (၃) 2015အမှီ ဒေါ်စုကိုယ်ပွား အမတ်လောင်းများ ဝန်ကြီးချုပ်လောင်းများ သမ္မတလောင်းများ မွေးထုတ်ဖို့ စင်ပေါ်တင်ဖို့ ဆိုတာရယ်။
၂၀၁၅ အမီ ၅၉ စ ကို မပြင်နိုင်လောက်ဘူး။ ဒါဆို အမေစု သမ္မတဖြစ်ဖို့အတွက် နောက်တစ်ချီ စောင့်ရဦးမယ်။ အချိန် ၅နှစ်နာသွားပြီ။ အဲဒီ နာသွားတဲ့ ၅နှစ်အတွင်းမှာပဲ တိုင်းပြည်တစ်ခြမ်း ရောင်းစားသွားနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ တောင်တွေ မြစ်တွေ စကားထဲ ထည့်မပြောဘူး။ ဒါကြောင့် အမေစု ဆိုတာချည်းပဲ မဟုတ်တော့ဘဲ NLD ကိုသာ ၀န်းရံသင့်တယ်။ ခန့်ခန့် ပြောတာ အရမ်းနည်းလမ်းကျတယ်။
အမှန်တော့ ဒီ ပို့(စ) တွေ မလာတော့ ဝူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ၊
အနော့ အမ ဝင့်ကို ရှင်းပြချင်လို့ ဝင်လာတာပါ။
ကျနော်တို့ ပို့(စ) ဆိုလိုရင်းကို မသိလို့ ထင်ရာမန့်တာမဟုတ်ပါဘူး အမရယ်။
လူရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သိနေလို့မန့်ရခြင်းပါ။
ခန့်ခန့် ရွာထဲ စဝင်ဝင်ချင်း ပို့(စ) တွေတုန်း က အမဖတ်မိရင် ….
ဒါမှမဟုတ် ဖွဘုတ်မှာ ဖရန့်ဖြစ်ထားရင် … အမ သိမှာပါ။
ကျနော် မျက်နှာ ၂ မျိုးကို မကြိုက်ပါဘူးးး။
သူ့လူ ကိုယ်ဘက်သား လုပ်တာမျိုးကိုလည်း မနှစ်သက်ပါဘူးးးး
ကြားနေဆိုတာ အားနည်းတဲ့သူဘက် မလိုက်ရဲတာတို့….
မှန်တဲ့ဘက် မနေရဲတာတို့ …
မှားတဲ့ဘက်မှာ ပြောင်မနေချင်တဲ့ သူတို့ … လို့ ပဲ မှတ်ပါတယ်။
ဘက်လိုက်ချင်း လိုက်ရင် ကာကွယ်ခြင်း ကာကွယ်ရင် ကိုယ့် နိုင်ငံ အတွက် စေတနာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုးဘက်က လိုက်မိလို့ လည်း ဘယ်တော့မှ နောင်တရမှာ မဟုတ်ပါဘူး အမ။
ဝါး ရေးတဲ့ ကော်မန့်တွေက အလကား ရေးတာလည်း မဟုတ်ပါဘူးးး
မနေ့ကပဲ ခန့်ခန့် ဖဘမှာ ……
အန်အယ်ဒီ က သူငယ်နာမစင်ဘူး ဆိုတဲ့ ပို့(စ) ရယ်…
စု က သမ္မတ မဖြစ်သင့်ဘူး ဆိုတဲ့ ပို့(စ) ရယ်…. ရှယ်ပါတယ်။
လူထုခေါင်းဆောင် လုပ်သမျှ ထိုင်ဝေဖန်ဖို့က တော့ အလွယ်လေးပါ။
ကိုယ့် အကြိုက်နဲ့ မညီရင် ….
လမ်းဘေးက ဘယ်သူမဆို ဘွားတော်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး အပြစ်ပြောလို့ရပါတယ်။
အဲဒီလောက်တောင်တော်နေတဲ့သူတွေ စု အကျယ်ချုပ်တုန်းက ဘယ်နားသွား အိပ်ပျော်နေလည်းပဲ ကျနော်တို့ မသိခဲ့တာပါ။
စု ကို မကြိုက်ရင် မကျေနပ်ရင် ရှင်းရှင်း ပြောတဲ့ အကောင့်မှန်သမျှ ကျနော်ထားပါတယ်။
ရဲမိုးတို့လို ဆရာကြီး ဒီဇိုင်းနဲ့ စစ်အစိုးရကို ချစ်တယ်လည်း ပြောင်မပြောရဲပဲ ….
စု ကို ဝေဖန်လေကန်တဲ့ ဆရာကြီး အထာတွေတော့ တောက်မြင်ကပ်တယ် အမ။
ဘာမှန်းမသိတဲ့ နားဝေတိမ်တောင်တွေကို ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုဖြစ်သွားစေ တဲ့ ပို့(စ) တွေမို့ပါ။
သူများ က အဟုတ်ထင်ပြီး စု ကို မကောင်းပြောနေတာကို ကြားက နား အရသာ ခံတဲ့ ဆိုက်ကို လို့ပဲ ယူဆပါတယ်။
ဒါ ဒီ ပို့(စ) တွေရဲ့ ကျနော့ နောက်ဆုံး ကွန်မန့်ပါ။
မ၀င့်နဲ့ ချွိကို အားနာလို့သာလာတာ ရပ်တည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိတဲ့သူမျိုး ကျွန်တော် သိပ်မုန်းတာ အပြင်မှာလဲဒီလိုပဲ… အစပိုင်းတုံးက ကကြောင်တောင် ဘွားဒေါ်လုပ်ရပ်တွေ အားမလိုအားမရဖြစ် ပို့စ်တွေတင်သေးတယ်… ဒါပေမဲ့ စေတနာပါတော့ လေသံက သိသာတယ်… စကား စကား ပြောပါများ စကားထဲက ဇာတိပြဆိုသလို ကျွန်တော်တို့က ဇာတိကို မြင်ပါတယ် မ၀င့်ရယ်…
ခုတော့ ကျွန်တော်လဲ ကျားကျားမီးယပ်တွေနဲ့ သိပ်မပြောချင်တော့လို့ လူမိုက် အဲလေ… ကြောင်မိုက် ငှားထားတယ်… ကကြောင်ရီး အမြင်မတော်ရင်လာပြောလိမ့်မယ်
အမ ဝင့်ပြုံးမြင့် သုံသပ်ချက်အတိုင်းကျတော်ဆိုလိုတာပါ။
အောက်ကဒေါ်ဇီဇီ နဲ့ Wow အတွက်ကျတော်ပြန်မန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၁။ ကျတော်သည် မည်သူ့နောက်လိုက်မှမဟုတ်ပါ။
၂။ လူသည်တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်နိုင်သလို အတွေးအခေါ်သည်
လည်း တချိန်နဲ့တချိန်မတူနိုင်ပါ။ လှေနံဓါးထစ်
၃။ နိုင်ငံအတွင်း ဖိအားမျိုးစုံအောက်မှာလက်ရှိနေထိုင်ပါသည်။
၄။ ကျတော့်နိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ကျင့်သုံးရေးသည် ပထမ
ခိုင်းလျှင် သန်း ၆၀ အတွက် ဒီမိုကရေစီကိုပဲရွေးချယ်ပါမည်။
၅။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နောက်လိုက်ဟု မခံယူ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကျတော်အပါအဝင် သန်း ၆၀
၆။ ဖေ့ဘုတ်တွင် ကျတော်ရှယ်သမျှသည် ကျတော့်စိတ်ကြိုက်တခု
မှမပါပါဘူး။ ကျတော့် friends တွေ ထဲက အွန်လိုင်းမသုံး
တတ်သေးသူတွေ အချိန်မရတဲ့သူတွေ သုတအစုံ ဘက်ပေါင်း
စုံ လေ့လာမှတ်သား ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ပါ။
၇။ ငါနဲ့ဘက်မတူရန်သူ ဆိုတဲ့စိတ် မမွေးတတ်သေးပါ။
၈။ NLD နဲ့ ဒေါ်စု နောက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ပါသည် ဟု
ခံယူထားသူများ၏ လုပ်ရပ်နှင့်ပြောဆိုမူ့များသည် တဖက်
ပြိုင်ဘက် ခံယူချက်ထားသူများထက် လိမ္မာ ပါးနပ်ဖို့လိုပါသည်။
မျိုးချစ်အုပ်စု ရပ်တည်နိုင်ခြင်းသည် ဤကဲ့သို့ မဆင်မချင်
ဒီရွာထဲတွင် ကျတော့်ရပ်တည်ချက်များကြောင့် မည်သူ့ကိုမှ
မကြောက်ပါ။ မည်သူ့ကိုမျှအားမနာနိုင်ပါ။ တယောက်ကိုမျှမရှက်
ပါ။ ကျတော်ရပ်တည်ချက်ကို ရဲရဲပြောပါမည်။ ပြောတတ်သလို
ပြောပါမည်။ ကျတော့်ကို အရောင်ဆိုးချင်သလို ဆိုးနိုင်ပါသည်။
လက်ခံနိုင်ပါက လက်ခံပါမည်။ လက်ခံနိုင်အောင်တော့ပြောနိုင်
အပြင်က အာဏာပိုင်တွေကို ကြောက်ပါသည်။
မည်သူ့ကိုမျှ (သူကြီးအပါအဝင်) မည်သည့်အဖွဲ့ ကိုမှ
ဒါပေမဲ့စိတ်တော့မကောင်းပါ။ (သူငယ်နာမစင်လို့ :mrgreen:)
ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ နောက်ထပ် ပိုစ့်တွေ
တကြောင်းစွဲ လူတစ်ဦးအပေါ် မြင်တဲ့အကျင့်တွေတော့
ကျတော်ကတော့ မန့်ရင်မန့်သလောက် ပြန်လာပါ့မယ်။
မဟုတ်မှလွဲရော.. ဒင်းကြည့်ရဒါ ထောက်လှမ်းရေး ဖြစ်မယ်…. စရဖလား အက်စ်ဘီလား ကြံဖွတ်လား.. ဘာရယ်လို့ ငါ့တံဆိပ် မခက်ချဉ်ဗူး… နင့်ဟာနင် ဖြေဇမ်း…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ၈၈ နဲ့ ၉၀ အထိ အစ မှာ သိပ်အားမထားခဲ့ပါ။
နောက်ပိုင်း မှာတော့ သူ ကလွဲ လို့ သူ့လောက် တော်တဲ့၊
ပြည်သူလူထုအတွက် သူ့ဘဝ ကို ရင်းခဲ့တဲ့ တစ်ခြားသူမှ မရှိတာ တွေ့လာ၊
ကိုယ်အစွမ်းကလဲ သူ့ ခြေဖျားက မြေမှုန် လောက်တောင် မမှီတာမို့
အစွမ်းရှိ ရုံ မက စေတနာ ပါရှိနေ သူကိုမှ အားမကိုး ရင် ဘယ်လို လုပ်ကြပါ့မလဲ။။
ကိုယ်အစွမ်းမရှိဘဲ အာဏာနဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာသူ များကလွဲ လို့ တစ်ခြားသူများ က သူ့ကို မကြိုက်စရာ၊ မချစ်စရာမရှိ လို့လဲ မြင်ပါတယ်။။
ဒီအချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို နိုင်ငံခေါင်းဆောင် အဖြစ် လက်မခံချင်သူ ဆိုရင် တိုင်းပြည် အတွက် မသိတတ်သူ၊ ကိုယ့်အတွက်ဘဲ သိတတ်သူ လို့ စွပ်စွဲမိရင် လွန်လား။
လူတစ်ယောက် ကိုဘဲ အားမကိုးချင်ပါ။
တစ်ပါတီထဲ ကို ဘဲ မကြိုက်ချင်ပါ။
ကိုယ့်တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖို့ အတွက် စေတနာ အမှန် ထုတ် ပြနိုင်တဲ့ ပါတီ တွေ အများကြီး ထဲ က ကိုယ်ကြိုက်ရာ တစ်ခု ကို ခေါင်းခေါက် ရွေးလိုက်ချင်စမ်းပါဘိ။
NLD ပါတီထဲလဲ ဟိုလူဒီလူ နဲနဲ ဘဲ အားကိုးစရာမြင်ရတယ်။
တစ်ချို့များ ပါတီထောင်ပြီ ဆိုလိုက်ကထဲက တိုင်းပြည်အတွက်ထက် ကိုယ် အာဏာရဖို့ ဖွဲ့တာတွေ မြင်နေရသလားဘဲ။
လောလောဆယ် မှာ ဒီဖွတ်ပါတီ ကိုဖယ်လိုက်မဲ့ အားကိုးရတဲ့ ပါတီကောင်း တစ်ခုကိုအရင် စည်းစည်းလုံးလုံး နဲ့ ရဖို့ လိုနေတာ။
တကယ်တော့ တိုင်းပြည် ထဲမှာဘဲ တိုင်းပြည်ကို စေတနာရှိတဲ့ လူတော်တွေ အများကြီး။
ဒီအချိန်မှ ဝင်လိုက်ရင် အဘ တို့ အငြိုအငြင် မခံရဲတာရော၊ လက်ရှိ အခြေအနေလေးပျောက်မှာ စိုးလို့ရော၊ သာကူး အခေါ်ခံရမှာရော နဲ့ စကားတွေ ဝဲ နေတာ။
တကယ်သူတို့ ဝင်ပေါင်းရင်ရော လက်ရှိ NLD ပါတီထဲ လူတွေက သဘောထားကြီးကြီး နဲ့ လက်ခံနိုင်မလားဘဲ။
လုပ်သင့်တာတစ်ခု ကို မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ခဲ့တာလို့။ (အရီး ကိုယ်ပိုင် သဘောပါ)
ဒီလို လူမျိုး တွေ အဓိက လူသိများတဲ့ ပညာရှင်စစ်စစ် တွေ NLD ထဲ ကို ဝင်ပြီး ပေါင်းရဲ စေချင်တယ်။ မဝင်ရင်တောင် အသေအချာ မြင်မြင်သာသာ ပံ့ပိုးပေးစေချင်တယ်။
အခု ဒီလိုလူတွေ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ဘယ်လောက် ပံ့ပိုးပေးနေလို့လဲ။
ပျားလဲစွဲသာ၊ ရှဉ့်လဲလျှောက်သာ လုပ်နေကြတဲ့ အထဲ ကိုယ်တွေလဲ ပါပါတယ်။
ဒီတော့ မီးစတစ်ဖက် ရေမှုတ်တစ်ဖက် သမားတွေ နေရာမဖယ်တော့တာ အဆန်းမဟုတ်။
ကိုယ့်ဟာကို “ကံ” ကောင်းတယ် လိုယုံကြည် ရင် ကိုယ့်လို “ကံ” မကောင်းနိုင်သူ တွေလဲ “ကံ”ကောင်း နိုင်စေဖို့ စေတနာ နဲ့ အားပါတဲ့လက်တွေ လှမ်းပေးဖို့ လိုမယ်ဆိုတာ ဘယ်လို နားချရပါ့။
(မီလင်ဒါဂိတ်စ် စကား ကို ယူထားပါတယ်)
သူတို့ အမှန်တရားဘက် ကို ရပ်ရဲလိုက်တဲ့ နေ့ (ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်ပေါ့)
“ကံ” ကို ပုံနေရတဲ့ သူတွေ အတွက် “ကံကောင်း” လာစေမဲ့ လက်တွေ ကမ်းလာတဲ့နေ့
အဲဒီနေ့ ကို ၂၀၁၅ မှာ မရသေးရင်တော့
အောက်ခြေလူထု အတွက် “သဗ္ဗေသတ္ဘာ ကမ္ဗသကာ” လို့သာဘဲ။
“အင်မတန် ကံကောင်းစွာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါး ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း” ကို ဘာမှ အသုံးမချနိုင်ဘဲ
တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် နဲ့ ဒီအတိုင်း ကြည့်နေခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည် က ပြည်သူ ဖြစ်နေရတဲ့ …
ဘာကိုမှ ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲ အောင် မပါဝင်နိုင်သေးတဲ့ …
ကိုယ့်ကိုယ် ကို ရဲ့ အသုံးမကျချက်ကို အပြစ်ဖို့ ရင်း။
We all wish for change, but there is no guarantee that change will take place or that it will live up to expectations.
(Aung San Su Kyi – The Essential Flame)
တစ်ခုတော့သတိထားဖို့က ဘုရားပြီးမှ ငြမ်းဖျက် ဆိုတာလေးလဲ မမေ့စေလို။
ဘုရား ကို မတည်ချင်တော့ ရင်လဲ တစ်မျိုးပေါ့လေ။
တကယ်က ဝန်းရံတာ လို့ ဆိုတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ဝန်းရံဖို့ထက် ပူးပေါင်း ပံ့ပိုးတာ လို့ ပြောမှ ပိုပြီး အနှစ်ရှိမယ်ထင်ရဲ့။
ဝန်းရံ ဆိုတာက အသာလေး ဘေးက နေရုံဘဲ။
အကာအကွယ်ပေးရုံကလွဲ လို့ ဘာမှ ထူးလုပ်မပေးနိုင်ဘူး။
ပူးပေါင်း ပံ့ပိုးတာ ကမှ တစ်ခုခုကို ကိုပိုပြီး အောင်မြင် ထူးခြားသွားစေနိုင်တာ။
အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး.တစ်ခုပြောပြမယ်.. အခုက၀န်းရံတာ၊ မ၀န်းရံတာဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂလစွဲနဲ့မဆိုင်ဘူး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀န်းရံတာ တရားမျှတမှုကို လိုလားတယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတကို ဖော်ဆောင်နေတာ၊ ဥပမာပေးရလျှင် အစိုးရက မလိုက်လျောဘူးဆိုတာသိရဲ့နဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာ ရူးနေလို့မဟုတ်ဘူးဗျ၊၊ အစိုးရမတရားမှုကိုပြုနေပါတယ်..ကြည့်ကြပါတော့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တရားမျှတမှုဘက်ကို လူတွေစိတ်ညွှတ်လာအောင်လုပ်နေတာ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီလောက်ဝန်းရံထားတာတောင် အာဏာရှင်တွေ လိုက်လျောမှုမရှိရင် ဘာကိုပဲ ၀န်းရံဝန်းရံ မထူးဘူးဆိုတာ သိစေချင်တယ်.. ပင်လယ်ရေငံမငံသိဖို့ အကုန်သောက်ကြည့်စရာမလိုဘူးဗျ.. အခု သမ္မတရာထူးနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀န်းရံတယ်ဗျာ..အာဏာပိုင်တွေက မလိုက်လျောဘူးဗျာ..ဒီတစ်ချက်နဲ့တော့ လူတွေဟာခေတ်မမှီတော့တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အေင်ဆန်းစုကြည်ကိုဝန်းရံထားလို့ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မလိုပါဘူး.. ကိုယ့်သမ္မတဖြစ်စေချင်တဲ့သူကို မ၀န်းရံလို့ ဘယ်သူ့ကိုဝန်းရံမလည်း.. ဒါကြောင့်မှားတယ်လို့ မဆိုသာပါဘူး.. နောက်တစ်ချက် ၂၀၁၅ ဘာဖြစ်လာမလည်းဆိုတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ်လို့မြှော်လင့်တယ်..မဖြစ်သေးလည်း တစ်ချိန်ချိန်ဖြစ်လာရမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်တယ်..ဒါလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စိတ်ဓါတ်ပဲ..အဲသလိုပဲ ကိုယ်လည်းခံယူတယ်..
ရွာထဲမှာ ခုတလော ကီးတွေမြင့်နေကြတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုရွာမှာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက် ခန့်ခန့် ရေ … ရေးချင်တာသာ ဆက်ရေးပါ။ အခုရေးတာတွေလည်း ဘာမှ မှားတယ်လို့ မထင်ဘူး။ ရွာထဲမှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အထင်အမြင်လွဲမှားတာ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ တော်တော်ကြာရင်လည်း အားလုံး စိတ်ပြေသွားကြမှာပါပဲ။ ပိုးစိုးပက်စက် အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ပြောတတ်တဲ့ ကဘုန်းကျော်ကြီးကိုတောင် တဖြည်းဖြည်း လက်သင့်ခံသွားနိုင်ကြတာပဲ။
ဇီဇီနဲ့ ဝေါင်းရေ အမတော့ လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ရှိသင့်တယ်ထင်လို့ ဖွဘုတ်ကို ဒီတစ်သက် သုံးဖြစ်မယ် မထင်ဘူး။ ပြီးတော့လေ ဒီရွာထဲမှာ စာတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ဆိုတာ စိတ်စေတနာလေးကလည်း ရှိမှဖြစ်တာ။ ဒါကြောင့် အရမ်းကြီးအလွန်အကျွံ မစဉ်းစားကြပါနဲ့နော်။
၂၀၁၅ အမီ ၅၉ စ ကိုမပြင်နိုင်ရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ မသိဘူးနော်။ အခု ၄၃၆ ပြင်တာတောင် သူတို့က ရှေ့က ကြောင်းပေးနေသလိုပဲ။ ခုတလော ဆြာပု ပျောက်နေတယ်။ သူဘာပြောမလဲ သိချင်တယ်။
ပါတီကိုဝန်းရံဖို့ အဲ့ကိတ်စဒေါ်စုလုပ်နေပါတယ်။ အသက် ၂၀ ကနေ ၃၀ ကြား လူငယ်တွေကိုမြို့နယ်အလိုက် ခေါ်ယူစုဆောင်းပြီး နိုင်ငံရေးဘာသာရပ်တွေ လူမှု့ဆက်ဆံရေးတွေကိုဒေါ်စုက်ုယ်တိုင်ကိုင်တွယ်လေ့ကျင့်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒေါ်စုဟာသူ ငါးနှစ်တာအာဏာရဖို့ ၂၀၁၅ မှာ အာဏာရဖို့ ခြေဥပြင်ဖို့လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အမျော်မြင်မဲ့စွာ ငါးနှစ်ပြီးငါမသိဘူးဆိုတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိပါဘူး။ သူအာဏာရတဲ့ငါးနှစ်မှာတိုင်းပြည်ကို မျိုးဆက်သစ်တွေလက်အပ်ဖို့ပြင်နေတာမို့ အခလုပ်နေကြတာတွေဟာ ဒေါ်စုကိုဝန်းရံဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်ပဲ ပါတီကိုကော နိုင်ငံကိုပါ ကာကွယ်ဖို့လုပ်နေတာပါဆိုတာလေးလာပြောတာပါ။
ကွန်နရှင်အခက်အခဲကြောင့်ဒီမှာပဲ ပြန်စာ မန့်ပါရစေဗဦးကြောင်ကြီး
ဒီပိုစ့်ကိုတင်တာ ၂၀၁၅ အတွက်ဘယ်လိုမြင်ကြသလဲဆိုတဲ့
ကိုယ်ပိုင်အမြင်လေးတွေကို ပြောချင်ကြမလားဆိုပြီး ကျတော့်အမြင်
ဒီရွာထဲမှာ ဒေါ်စု သို့ nld ထောက်ခံတဲ့ပိုစ့်သာတင်ရမယ်လို့
ဒီတော့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ယူဆချက်ကလေးတခုက ဒေါ်စုနဲ့nld
ဒီတော့တခြားအမြင်ရှု့ဒေါင့်ကနေ တင်ပြချက်ကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်ဖို့ ဦးကြောင်ကြီးသင်ယူပါ။
““အင်မတန် ကံကောင်းစွာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါး ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း” ကို ဘာမှ အသုံးမချနိုင်ဘဲ
တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် နဲ့ ဒီအတိုင်း ကြည့်နေခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည် က ပြည်သူ ဖြစ်နေရတဲ့ …”
မရအောင် အာဏာရှင်များက ပိတ်ပင်တားဆီးကြတာပါ။
ကျတော်တို့ပြည်သူတွေ အသက်သွေးချွေး ကျခဲ့ရသည့်တိုင်အောင်
ကျတော်က ဒေါ်စုရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြည်သူ့တွေအတွက်သမ္မတ ဖြစ်နိုင်ခွင့်ကို အလေးပေး
ရွာထဲမှာ ခုတလော ကီးတွေမြင့်နေကြတယ်။
(ဟီးဟီး ကိုဘုန်ကျော်တောင် ကျတော်f/b fri လုပ်ထားသေး)
ဒါကြောင့် ကီးကမာစတာကိုကျော်ပြီး ပါရဂူအထိမြင့်သွားရတယ်။
ကျတော့်အထင် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ လောက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ
ဘယ့်နှယ့်ကြောင့် ၂၀၂၀ မှဒေါ်စုကိုသမတပေးဖြစ်ချင်တာပါလိမ့်။ ခိုးလို့မ၀သေးလုိ့များလား။ ဒါမှမဟုတ် ငါတို့သေမှဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များလား သိချင်လိုက်တာ။
ဒေါ်စုကို ၂၀၂၀ လောက်မှမှန်းနေ
ဆုတောင်းလေ … ဆုတောင်း အောင်တော်မူမှာသွားဆုတောင်း
သမ္မတရာထူးကို ဒေါ်စုက ယူနိုင်သည်ဖြစ်စေ
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ချက်စ်ထိုးသလို ကစားကွက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲဖြစ်စ နိုင်ငံငယ်လေးတွေမှာ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေ၊ သူရဲကောင်းကိုးကွယ်တာတွေဟာ ဖြစ်မြဲဓမ္မတာတွေပါ။ အဲဒါတွေကို ကျော်လွန်နိုင်မှ လက်ကြီးသမားတွေ ကစားတာကို မခံရမှာ။ အခုက ခန့်ခန့်ပြောတာက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖယ်ပြီးတွေးလိုက်ရင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး။ ကစားကွက်ကိုပဲ ပြောသွားတာ။ ဒါကို ဖတ်တဲ့သူတွေက အမေစုကို ထိပြီမှတ်ပြီး ၀ိုင်းဆော်ကြတာ။ ဟုတ်ပါပြီ။ ၂၀၁၅မှာ လူထုက ထောက်ခံရင်ပဲ သူ သမ္မတဖြစ်မှာလား။ ဘယ်တော့ပြင်မှာလဲ။ ၅၉ စ ကို။ ဘယ်အချိန်မှာ ပြင်ကြမှာလဲ။ ဒါကို မပြင်နိုင်လို့ အမေစုကိုယ်ပွား ကို မွေးထုတ်ဖို့ပြောတာပါ။ အမေစုကသာ ဒါကျမ ကိုယ်ပွားပါဆိုရင် အားလုံးက စကားနားထောင်ကြမှာပါပဲ။ ဒါဟာသာလျှင် သူ့ရဲ့ အလှပဆုံး နိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်သူ့ကို စင်ပေါ်တင်မလဲ။ ဒါဟာသာလျှင် သူ့ရဲ့ ကမ္ဘာကျော် ကစားကွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ တိုက်ပွဲက ၂ဆင့်လာရမယ်။
ကျတော်အမြင်ကို မြင်ပေးလို့ပါ။ (လက်ခံတယ်ဆိုတာကကျတော့်အပိုင်းတော့
ပုံစံမျိုး ဒေါ်စုကခင်းကျင်းလာခဲ့ရင် (တထပ်တည်းမဆိုလိုပါ)
ဘယ်သူ့စကားက အပြောချိုပေမဲ့ စေတနာစကားလိုနဲ့ တကယ်တမ်းမကောင်းတဲ့ဟာဆိုတာ
ဖြစ် ချင် တာ တွေ ဖြစ်သင့် မှာ ကို စဉ်း စား ကြည့် ဘို့ လို မယ် လို့ ဘဲ ပြော ချင် ပါတယ်။
ဖြစ် ချင် တာ ပြော ရ မယ် ဆို ရ င်တော့ အများ ကြီး ပါဘဲ။။
တစ်ဦး တစ်ယောက် ထဲ လက် ထဲေ၇ာက် သွား တဲ့ အခါ
ကြုံ တွေ ခဲ့ တဲ့ ရလာဒ် ဆိုးတွေ တော့ မမေ့ သေးဘူး လို့ ဘဲ ပြော ချင် ပါတယ။်
ဘာ လို့ လဲ ဆိုတာ အထက် က လူ က အောက်က လူ ကို မထိန်း တာ ခေတ် အဆက်ဆက် မှာ ကြုံ ဘူး လို့ ပါဘဲ။
အသေး စိတ် ရေး ပြ မယ် ဆို ရင် အခန်း ဆက် ရေး မှ လုံ လောက် မယ် ထင် ပါ တယ်
ပြည်သူတွေရဲ့ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဆိုတာတွေနဲ့
ဒီလိုဖြစ်သင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘော တွေက တအုပ်စု။
မဖြစ်အောင် ပေးနေတဲ့အာဏာပိုင်များက စည်းလုံးညီညွတ်
ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ နဲ့ ဖြစ်သင့်တဲ့အရာ ကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့
ပြည်သူ တွေမှာတော့ ကွဲပြားနေတယ်လို့လဲမြင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲ ဆိုတာကို ပိုစိတ်ဝင်စားမိကြောင်းပါ။